I-DA-BC37001 2020 i-cookware yokuthengisa eshisayo eyenziwe e-china
I-DA-BC13001 cast iron cookware 2020 yokuthengisa okushisayo ikhwalithi ephezulu
I-DA-BC13001 cookware eyenziwe eChina 2020 ethengisa kakhulu
Kunezinzuzo eziningi zokupheka nge-cast iron cookware. Enye yezinzuzo ezinkulu ukupheka ngamafutha amancane uma usuthole isinongo esihle kuma-cookware akho. Lokhu kuvumela ukudla okuncane okunamafutha kanye namafutha amancane ukufeza uqweqwe olungaphandle olunsundu. Enye inzuzo ukuthi lapho usebenzisa insimbi yensimbi yokupheka i-ironware izokuqinisa ngokwemvelo ukudla kwakho ngensimbi. Ngokwengeziwe lokhu kungenye indlela engenamakhemikhali yamapani angewona enduku asanda kwenziwa njengeTeflon noma iCeramic
I-DA-BC26001 / 32001/32002/37001/37002 i-iron yensimbi engu-2020 ethengisa kakhulu